प्रयोगकर्ता:Bijyu - विकिपिडिया
national_anthem = सयौं थुङ्गा फूलका हामी
याम्बु तामाङ इतिहास
= भगवान बुद्धले काठमाडौंको कमल पोखरीको छेउमा एक वृक्ष रुखमा तपस्या गरेको थियो । नाग देवले उसको संरक्षक दिएको थियो । कमल पोखरी र कमल पोखरीको उत्तर तिर नाग पोखरी आजसम्म छ । यहाँका पुराना बासिन्दासँग सोधे भने भन्छ बुद्धले तपस्या गरेको ठाउँ हो । धेरै देशहरूमा बुद्धको धेरै चर्चा छ तर नेपालमा भगवान बुद्ध जन्मेर पनि ओझेलमा छ । भगवान बुद्ध को रहेछ, को हो ? भगवान बुद्धले फूपू मामा छोरी बिहे गरेको रहेछ, राजकुमारी यशोधरा संग । बुद्धको पिता शुद्धोदन र यशोधराको आमा पमिता हुन् । शुद्धोदनको आफ्नै बहिनी थियो पमिता र आफ्नो बहिनीको छोरी, राजा शुद्धोनले आफ्नो छोरा संग बिबाह गरिदिए । थेरवाद सब्द तामाङ सब्द हो अर्थात थेरवाद भनेको परिवारका छोरा र छोरी पहिलो जन्मेको छोरा र छोरी बुझिन्छ । भगवान बुद्ध मंगोल समाज भित्र जन्मेको भने बुझिन्छ र यो संस्कार मामा फूपू को छोरी बिहे गर्ने चलन मंगोल मध्ये तामाङ र गुरुङ समाजमा धेरै लोकप्रिय चलनचल्तीमा छ । सनातन वर्णाश्रम हिन्दु कुलका क्षेत्रीय शाक्य र गौतम गोत्र भनेर लेखिएका छ । तार भगवान बुद्ध कुनै क्षेत्रीय शाक्य र गौतम गोत्र हुन सक्दैन । एक ऋषि गौतम नाम गरेको ऋषिले कथा लेखेको हुन् । यो भन सकिन छ, तर भगवान बुद्ध कुनै क्षेत्रीय शाक्य र गौतम गोत्र होइन । यति भगवान बुद्ध गौतम गोत्र र क्षेत्रीय भएको भए मृत्युपछि मन्दिर बनाउने थियो र त्यसमा पण्डितले र पुजारी पुजा गर्थे । भगवान बुद्ध मृत्युपछि धेरै स्तूपा, गोम्बो र मनेहरु बनाए । ( स्तुपा, गोम्बो र मने तामाङको मृत्युपछि अनिवार्य बनाउनु पर्ने जसलाई घेवा पनि भनिन्छ । )
२ तामाङ संस्कार
२.३ माग्ने विवाह
२.४ प्रेम विवाह
२.५ जारी विवाह
२.६ बिधवा विवाह
Stupa is said to have been the birth has not been able to confirm. One of the Mongol society, society Tamang, Tamang, after copper and brass grave burn by the rental trend is running sadiyaundekhi day. After the death of the deceased relatives and families of the deceased body of copper and brass to rent, gold, silver, precious jewelry and clothing with burial was customary. So entrenched has surrounded the grave on the boat, making gompo father placed the stupa remains to this day believe in the practice Tamang society. The theft were buried inside the tomb at night. Bring valuable jewelry and utensil piracy body ofadeceased who stick out and eat wild animals were.  And it wasadead body to burn. A piece of bone is kept out of the burning death during and after burning the dead body toapiece of white cloth wrapped cord set out after it called Stupa. Stupa with unseen by anyone placed between the way. Deceased son, daughter, brother and relatives discuss one another. That way, when the last day of the deceased is discussed and it is also called Ghewari. Ghewari three ways. Ghewariaday, for three days and on the seventh day Ghewari is Ghewari. Ghewari had started the day at midnight, relatives of the deceased and in accordance with the tradition of his home Lama Stupa including musical instruments that Mani Padme 108 lamp burning in the house when they express Stupa. And when poor people were already Lama stupa to stupa that gives to the soil mixed. Some copper or brass pedestal were the stupa to do to make the rent by deep-gompo. The stupa is very common to haveagreat big copper and brass to make the rent in rental stupa, gold, silver and precious jewelry and entrenched themselves onalot that has surrounded the boat is placed between the stupa. Unforgettable is made by covering one out and called Stupa. For example stupa and Buddhist stupa in svayambhu deceased human bone is kept and made it through the day is ascertained by several strong.
तामाङ संस्कार[सम्पादन गर्ने]
तामाङ समुदायमा नवजात शिशुको जन्मलाई खुशियालीको रूपमा लिइन्छ । बच्चाजन्मेको तीन देखि सात दिन भित्र राम्रो साईत हेराई लामा पुरोहीत बोलाई नयाँ बच्चाको नामाकरण र सुत्केरी चोख्याउने कार्य गरीन्छ । तामाङ समाजमा न्वारान अर्थात् बच्चाको नाउँ राख्ने, नाक, कान छेंड्ने, भात खुवाइ, छेवार, गुन्युचोलो दिने, विवाह र घेवा अर्थात् मृत्युपछिको अन्तिम संस्कारजस्ता संस्कार रहेका छन् । बालबच्चाको नाम राख्ने काम लामाले गर्दछ भने खाना खुवाउने काम घरमुलीबाट गर्ने गरिन्छ । तामाङ समाजमा पहिलोपटक छोराको कपाल काट्ने काम मामाले गर्ने परम्परा छ । यस्ता कर्य गर्नका लागि मुल मामा छैन भने मामा को दाजुभाइ वा मामुली बनाउनु पर्छन् । यो परम्परालाई छेवार भनिन्छ । छोरीलाई स्यमा, चोलो, र गुन्नेयो दिने परम्परा छ, यसमा घर परिवार आफन्तहरू जम्मा भएर यो कार्य गरिन्छ । छोराको कपाल काटनु र छोरीलाई लुगा दिने कार्य तीन बर्षा वा सातौ बर्षामा दिइन्छ ।
बच्चाको नामाकरण साधरणतया तामाङ भाषाका बारहरूको नाम आधारमा गरीन्छ, जस्तो दोर्जे, दावा, निग्मार, मिग्मार, ल्हग्पा, फुर्बु, पासाङ र पेन्पा यस्तै नाम राखिन्छ र बोलाउने नाम अर्को हुन्छ । तामाङ्को दुईटा नाम हुन्छ जन्म र कर्म नाम । यसले गर्दा बहुसंख्यक तामाङ पुरुष र नारीको नाम आपसमा मिल्छ। न्वारन गरिने बच्चाको अघिल्लो दाजु दिदीको अल्पायुमा मृत्यु भएको रहेछ भने सो बच्चाको नाम कामी, सार्की, दमाई आदि राखिन्छ ।
यसरी बच्चाको नाम लेखी सम्भोट लिपिमा सो नाम लामाले राखेको हुन्छ । त्यस नाम कर्न सम्भोट लिपि बाट मृत्युपछि घेवा गरिन्छ, जसलाई ज्याङ्यो कात्रो भनिन्छ । भात खुवाउने दिनमा, आफ्ना नातागोताहरू, साथीहरू र छिमेकीहरू जम्मागरि भोज खुवाउने चलन छ। नानीललाई
खुवाउनु आएकाहरूले पनि नानीको लागी कोसेली वा खाम्मा केही रकम राखी बच्चाको हातमा दिई आशिर्वाद दिने र बच्चा तथा बच्चाको आमा बाबुलाई खता लगाई दिने चलन छ। तामाङ समाजमा जन्म दिन मनाउने चलान थिएन तर आजकाल तामाङ जम्मा दिन मनाउने गर्छन् ।
तामाङ जातिको विवाह
तामाङको महत्वपूर्ण संस्कारहरू मध्ये विवाह संस्कार पनि एक हो। यस जातिमा मागी विवाहको बढी प्रभाव रहने भएता पनि प्रेम विवाहको पनि छिटफुट चलन छ। आफ्नो मौलिक परम्परा अनुसार प्रायः विवाहित छोरीको सन्तान माइता मै हुर्कने पुरानो चलन भएकोले तामाङ समुदायमा मामा र मामुलीको महत्व निकै उच्च पाइन्छ। जन्मेर छेवार देखि मृत्यु सम्म मामा मामुलीको निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
मामा फुप्पुको छोरी विवाहमा हक लाग्छ यो चलन अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । भगवान बुद्धले फुप्पुको छोरी विवाह गरेको हुनाले पनि अति महत्व स्थानमा राखिएको पाईन्छ । बुद्ध धर्ममा धेरै जातीय छ तर विवाहमा फरकफरक पाईन्छ ।
त्यस्तै विवाहिक विविध थर हरूको आधारमा कुटुम्भ र स्वाँगेभाई छुट्टयाउने विशेषता यो समुदायको विवाहवारीमा अर्को संवेदनशील तथा अति महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ। जस्तै दोङ, माम्बा, बल, गोले, गङ्दान, स्योङ्दान, डिमदुङ, गोङ्बा, तितुङ आले मगर, र बज्यु थर हुनेहरू स्वाँगेभाई हुन विवाह चल्दैन । त्यो बाहेक अन्य जुनसुकै सँग विहेवारी चल्छ । तामाङको धेरै थर छ र सबै थर संग स्वाँगेभाई हुन्छ । यो जातिको विवाह संस्कार अलि जटिल र रोचक मानिन्छ। गाँउबाट शहर र शहरबाट प्रदेश बसाँइ सरेर जाने क्रममा सामान्य परिवर्तन हुन थाले पनि मूलभुत रुपमा आफ्नो पुर्खा सात पुस्ते मान्यता र विवाहमा स्वाँगेभाई हेर्ने लगायतका विधि आदिलाई विधिवत रुपमा पूरा गर्नै पर्ने मान्यता रहिआएको पाइन्छ ।
तामाङ समाजमा पोङ् (स्य्लगार्) को महत्त्वपूर्ण नियम छ । केटीको बाबुआमाले नियम पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी माग्ने र पोङ्ग राखेपछि यो विवाह एक साल पनि हुन सकिन्छ छह महिना पनि हुन्छ । केटीलाई भित्र्याउन केटोको घर स्थितिमा भार पर्ने हुन्छ । पोङ् राखेपछि छोरीको विवाह नभएसम्म बाबुआमाको घरमा बस्नुपर्ने । छोरीले पोङ्लाई बिहान धूप वा फेमार बाल्नु र रातमा खान खानु भन्दा पहिले दियो बालेर मात्र खानुपर्छ । यति पोङ्ग राखिएको छोरी आर्को संग विवाह गरेर गएमा, बहिनी छ भने बहिनी दिएर पोङ्को नियम पालन गर्नु पर्छ । यदि बहिनि छैन्न् भने जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । केटोले अर्कै विवाह गर्‍यो भने पोङ् फिर्ता गरि र मेलमिलाप भएर बसेका हुन्छ ।
धुप वा फेमार बाल्नु अर्थ, हे गोङ्च्यो सोम् मेरो हुने बाल पतिको सदैव रक्षा गरुन् दियो, रातमा बालेको दियो जसरी सदैव चम्किलो रहि रहोस् तिम्रो मुहारमा भने बुझिन्छ ।
जन्ती: विवाहमा जन्ती जाद केटा को बहिनी वा दाजुभाइ चेली कन्या केटीलाई सगुन लिएर अगाडि अगाडि हिंड्नुपर्छ । जन्ती रातको समयमा मात्र केटीको घर भित्र छिर्नु पर्ने र सबै बिधि पुरा गरि बिहानको उज्यालो हुनु भन्दा पहिले केटीको घरबाट केटीलाई लिएर हिँड्ने परम्परा छ । केटीको माइती दाजुभाइले चेली लाई बोकेर कर्म घरसम्म पुर्याउनु पर्ने चलन छ ।
१, माग्ने विवाह
२, प्रेम विवाह
३, जारी विवाह
४, बिधवा विवाह
माग्ने विवाह[सम्पादन गर्ने]
१, माग्ने विवाह:
तामाङ जातिमा पहिलो प्रथामा मामा फूपू को छोरीलाई माग्न जान्छ । सबभन्दा पहिले केटा र केटीको उमेर हेर्ने, उनिहरूको जन्म बर्ष (लो ) को आधारमा लामा ज्योतिष र जान्ने मान्ने लाई दिन साईत हेरेर विधिअनुसार लगनमिलन् हेराएर उनिहरूको दाम्पत्य जिवन राम्रो हुन्छ वा हुन्न भन्ने हेरिन्छ। सबैकुरा ठीक भएमा सगुन लिएर केटी माग्न आउँछौ भनी केटीको माईतमा खबर पठाईन्छ। केटीको माईतबाट सकरात्मक जवाफ आएमा राम्रो साईत हेरी एउटा विशेषता पोङ्गमा सगुन लिएर रात पुगिन्छ । केटा र केटीको घरका मुला आफन्त परिवार संगै बसेर छलफल गरि कुरा मिलेपछि पोङ्गलाई राखिन्छ । यसलाई पोङ्ग जाङ्जी ( साल्गारी) पनि भनिन्छ,र पोङ्ग (साल्गारी) च्योजी पनि भनिन्छ ।
प्रेम विवाह[सम्पादन गर्ने]
प्रेम विवाह: तामाङ समाजमा प्रेम विवाहको पनि प्रचलित पाउछ । प्रेम विवाहमा पनि पहिलो केटी माग्न जान्छ । त्यसमा राजीखुशी भएन भने केटाकेटी भागेर लुकाउन, वा लुकाइराखेको हुन्छ । दुई घर बीचमा परिवारको सदस्य मेलमिलाप नभएसम्म केटा र केटी लुकेर बसेका हुन्छ । यसरी भागेर बस्ने केटा र केटी एक बर्षा भित्रमा विवाह गर्नु पर्छ । लामा गोम्पो वा मन्दिरमा गएर विवाह गर्नुपर्छ । अर्को साल लगेपछि दुइटा लो (दुई साल) हुन्छ भने परम्पराको रहिआएको छ । बिजोर सालमा मात्र विवाह गरिन्छ । केटीको आमाबुबाले छोरीलाई मनाउनु पर्ने हुन्छ । मनाई सकेपछि छोरीलाई बिधि पुर्न कार्य गर्न बोलाउने र छ्येठिम् ब्लि, (चार धान्) गरिएर, आज बाट पतिपत्नी भयो भनेर आशिर्वाद दिन्छ । त्यसपछि अफ्नो रीतिरिवाज लाई अगाडिको बाटो खोली दिनेछ ।
जारी विवाह[सम्पादन गर्ने]
जारी विवाह: तामाङ समाजमा जारी विवाह पनि हुने गर्छन् । विवाहित महिला घर जाम भैसकेको वा परिवार भैसकेको महिलालाई प्रेम जाली गरेर भागेर लिए जानेलाई जारी विवाह भनिन्छ । तर समाजमा अलि खिन हिसाबले कुरा काटेको हुन्छ । समाज परिवारमा केही मुडभेट हुन्छ, र मेलमिलाप हुनुलाई केही समस्य संग जुट्नु पर्ने हुन्छ । यस जारी विवाहमा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
जरिवाना, विवाह गरि लगेको बेला छ्येठिम् ब्लि (चार धान्) मा कस्तो नियम बनाएको थियो, त्यही नियम अनुसार केटीको आमाबाबुले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । जरिवाना लिएपछि त्यस पैसाले सार्बजनिक स्थानमा छडी गएको श्रीमतीको नाम खर्च गरिन्छ । जरिवाना लगेपछि अफ्नो छोरीलाई बोलाएर दोस्रो विवाह गरेर पठाएको हुन्छ । यदि केटीको आमाबाबु छैन भने दाजुभाइ मिलेर चेलिबेटी को परम्परा अनुसार रीतिरिवाज गरेर विवाह गरि दिन्छ ।
बिधवा विवाह[सम्पादन गर्ने]
बिधवा विवाह: बुधवा विवाह, यो विवाह केटीको चाहना अनुसार मान्यता हुनेछ र तामाङ समाजमा मान्यता दिएको पाइन्छ । यस विवाहमा केटीको माइतीघर दाजुभाइ वा आफन्तको आज्ञा अनुसार हुनेछ र आफ्नो खुसीले पनि विवाह गरिन्छ । केटीले माइतीमा गएर छ्येठिम् ब्लि, (चार धाम) गरिनुपर्छ । तार आफ्नो लोग्ने मृत्यु भएको ४९ दिनसम्म बार्नु पर्ने हुन्छ भने घेवा गरि सकेर ४९ दिनसम्म केही कार्य गर्नु हुदैन भने मान्यता पनि छ । त्यसपछि समाजमा खुला हुन्छ ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=प्रयोगकर्ता:Bijyu&oldid=675690" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १७:२७, ३० सेप्टेम्बर २०१८ मा परिवर्तन गरिएको थियो।